, Hotmail အကောင့်ဖန်တီးနည်းအခမဲ့အဘို့, Hotmail အကောင့် Up ကို Sign 🤑
, Hotmail အကောင့်ဖန်တီးနည်း | Up ကို Sign မှအပြီးအစီးလမ်းညွှန်
ဒီဇင်ဘာလ 19, 2019 အားဖြင့် HOTMAIL255aComment ချန်ထား
, Hotmail သို့မဟုတ် Outlook.com အဲဒီမှာအသုံးပြုသူများကိုအခမဲ့အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ပေး, အရာဖြစ်ပါသည် မိုက်ကရိုဆော့ဖအားဖြင့် run. သင်တို့ကဲ့သို့မေးခွန်းများရှိပါက , Hotmail အကောင့်ဖန်တီးနည်း သို့ဖြစ်လျှင်ဤဆောင်းပါးကိုသင်၏ပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်. သငျသညျအရများစွာသောအားသာချက်များကိုတစ်ဦး, Hotmail account ဖန်တီးပြီးပြီးနောက်ရှိပါတယ်.
ဒီ post ကိုဒီမှာဖော်ပြထားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအောက်ပါခြင်းဖြင့်လွယ်ကူစွာသငျသညျမှတျပုံတငျနိုင်ပြီးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်, Hotmail account ကိုဖန်တီး. ရန်ခြေလှမ်းပုံစံအားဖြင့်တစ်ဦးခြေလှမ်းအတွက်ပြည့်စုံမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရယူပါ တစ်ဦး, Hotmail အကောင့် Create. သင်ရုံဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းခြေလှမ်းအတိုင်းလိုက်နာရန်ရှိသည်, နှင့်သင့်, Hotmail အကောင့်ကိုအလွယ်တကူဖန်တီးပါလိမ့်မည်.
သင်တို့အဘို့ပြည့်စုံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအကြောင်းကိုသိရန်ဤဆောင်းပါးကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ပါရန်ရှိသည် တစ်ဦး, Hotmail အကောင့်ကို. ဤဆောင်းပါးသည်ကိုသင်, Hotmail အကောင့်ဖန်တီးနည်း ပတ်သက်. စစ်မှန်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းအချက်အလက်များပေးပါသည်.
သင်သိလား Hotmail ကကမ္ဘာကြီးကိုပထမဦးဆုံး webmail ကိုဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည် စတင်ခဲ့သည် 1996? နှင့်တစ်နှစ်အကြာတွင် Microsoft ကအထဲတွင်ရရှိသည် 1997. မိုက်ကရိုဆော့ဖ Outlook.com အတွက်အားဖြင့်, Hotmail ကိုအစားထိုးပြီးနောက်ထက် 2013. , Hotmail ဖြစ်ပါသည် Sabeer Bhatia နှင့်ဂျက်စမစ်တို့ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နှင့်၎င်း၏ဌာနချုပ်မှာ Sunnyvale ၌တည်ရှိ၏, ကယ်လီဖိုးနီးယား.
သင့်ရဲ့, Hotmail အကောင့်တီးပွီးသင်သည်များစွာသော features တွေရနိုင်. အောက်ကဖော်ပြထားထုတ်စစ်ဆေး5အဓိက , Hotmail ၏အင်္ဂါရပ်များ.
ကို Creative ဓာတ်ပုံ features တွေ.
Awesome ကို Junk mail ကို features တွေ.
ဒါဟာ Microsoft က Office ကိုအတူပေါင်းစည်းရဲ့.
, Hotmail အကောင့် Create | အဆင့်လျင်မြန်စွာလမ်းညွှန်အားဖြင့်အဆင့်
ယခု, အောင်မြင်စွာဖို့ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်အားဖြင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြချက်ခြေလှမ်းမြျှောနှင့်ကိုလိုကျနာ သင့်ကိုယ်ပိုင်, Hotmail အကောင့်ဖန်တီး. သငျသညျကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များကဲ့သို့အင်တာနက်ချိတ်ဆက် device ကိုလိုအပ်, laptop, ဒီဖြည့်စွက်ရန်စမတ်ဖုန်း Hotmail က Process ကို Up Sign.
ပေးထားသော, Hotmail တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ: outlook.live.com/owa
ဒီစာမျက်နှာတွင်, ယင်းအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “အခမဲ့အကောင့် Create” ကြယ်သီး.
ယခု, သငျသညျနယူးအီးမေးလ်ကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့်ဒိုမိန်းကို select ရန်ရှိသည် @ hotmail.com သို့မဟုတ် @ outlook.com. ကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြီးနောက် “နောက်တစ်ခု” ကြယ်သီး.
ဒီအဆင့်မှာ, သင်တစ်ဦး Password ကိုဖန်တီးပါရန်ရှိသည်, ပေးထားသောအာကာသနှင့်စာနယ်ဇင်းများတွင်ထည့်သွင်း “နောက်တစ်ခု” ကြယ်သီး.
ယခု, သတင်းအချက်အလက်ပထမအမည်နှင့်နောက်ဆုံးအမည်နှင့်စာနယ်ဇင်းတက်ဖြည့်ပါ “နောက်တစ်ခု”.
ယခု, သင်ပိုင်နိုင်ငံ / တိုင်းဒေသကြီးနှင့်သင့်မွေးသက္ကရာဇ်နှင့်စာနယ်ဇင်းကို select “နောက်တစ်ခု”.
ယခု, သငျသညျတကယျ့ပုဂ်ဂိုလျကဒီ account ဖန်တီးပြီးကြောင်းသေချာစေရန်ကြည့်ရှုဇာတ်ကောင်ဝင်.
သငျသညျအပေါငျးတို့သပြီးစီးခဲ့ပါလျှင်7ခြေလှမ်းများ, ထို့နောက်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးပါလိမ့်မည်.
ယခု, သင်သည်သင်၏, Hotmail Inbox ထဲမှာရိုက်ထည့်ရန်ဂရုတစိုက် on-screen ကိုညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာရန်ရှိသည်.
မှတ်စု : အကြီးအသုံးပြီးသင့်ရဲ့ Password ကို Strong Make, စာလုံးအသေး, ဟက်ကာများကနေသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုလုံခြုံစေရန်နံပါတ်များနှင့်အထူးဇာတ်ကောင်.
, Hotmail ကိုဆက်သွယ်ရန်သတင်းအချက်အလက်
အောက်ကဖော်ပြထားထုတ်စစ်ဆေး Hotmail ကဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုတောလည်ရာ. သငျသညျအချိန်မရွေးခေါ်နိုင်ပါတယ် 24/7 သင်ရှိသည်ဆိုမေးမြန်းမှုများအတွက်.
သေဆုံးသူ-အခမဲ့ :- 1800 572 1100 /1800 102 1100
သေဆုံးသူ-Pay ကို :- 080 4010 3000
, Hotmail ဝီကီပီးဒီးယား
အကြောင်းကိုဒီမှာလျော်သောညွှန်ကြားချက်ကိုရယူပါ , Hotmail အကောင့်ဖန်တီးနည်း. ဤဆောင်းပါးသည်ခြေလှမ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကခြေလှမ်းအတွက်ပြည့်စုံမှုလုပ်ငန်းစဉ်များပါဝင်သည်, အဆင့်များအတိုင်းလိုက်နာနှင့်သင့်, Hotmail အကောင့်ရိုက်ထည့်ပါကဖြည့်စွက်. လည်း, မည်သည့်စုံစမ်းမှုများအတွက်ဆက်သွယ်ပါသတင်းအချက်အလက်ထုတ်စစ်ဆေး.
သင်သည်မည်သည့်ပြဿနာရင်ဆိုင်ရဖြစ်စဉ်ပြီးပါကနေစဉ်ထို့နောက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြချက်မှတ်ချက် box ထဲမှာမှတ်ချက်ရေးရန်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီ. နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုထုတ်စစ်ဆေး www-hotmail-com.email ပုံမှန် update များအတွက်.
အောက်မှာ Filed: ဆိုင်းအပ် အတူ Tagged: , Hotmail အကောင့် Create, Hotmail ကဖန်တီးလုပ်နည်း, , Hotmail သည်မှတ်ပုံတင်မယ်
, Hotmail ဝင်မည်လုပ်ငန်းစဉ် | , Hotmail သို့ဝင်ပါ & Password ကို Recovery ကို
Outlook နဲ့အကောင့်ကို Create | Outlook နဲ့ Up ကို Sign – အပြီးအစီးလမ်းညွှန်
Yahoo Mail Password ကို Reset | Yahoo Mail Password ကိုပြောင်းလဲနည်း
Outlook ကိုဝင်မည် | Outlook နဲ့အကောင့်သို့ဝင်ပါ – quick လမ်းညွှန်
မူပိုင် © 2020 · မဂ္ဂဇင်း Pro ကို အပေါ် ကမ်ဘာဦးကမူဘောင် · WordPress ကို · လော့ဂ်အင်